किन पढ्ने, इलेक्ट्रोनिक्स, कम्युनिकेसन एण्ड इन्फर्मेसन इन्जिनियरिङ ? - Engineers Post
कुल इन्जिनियर : ६०११९ : सिभिल : २४०७४ / इलेक्ट्रिोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन : ८२३९ / कम्युटर : ७६९३ / मेकानिकल : ४९५६ / आर्किटेक्ट : २३९२ / इलेक्ट्रिकल : २६०४ / इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स : २०५१ / इन्र्फमेसन टेक्नोलोजी :८१५ / एरोन्यूटिकल : ४९६ / इन्डस्ट्रियल : ४४० / बायोमेडिकल : ४२६ / एग्रीकल्चर : ३८२ / जियोमेटिक्स : ३६३ / इलेक्ट्रोनिक्स : २८४ / इन्र्भारमेन्ट : २६२ / अन्य : ८०७ / स्रोतः नेइका
किन पढ्ने, इलेक्ट्रोनिक्स, कम्युनिकेसन एण्ड इन्फर्मेसन इन्जिनियरिङ ?
इन्जिनियर्स पोस्ट February 21, 2021
सूचना प्रविधिको औपचारिक पढाइलाई इलेक्ट्रोनिक्स, कम्युनिकेसन एण्ड इन्फर्मेसन इन्जिनियरिङ भनिन्छ । इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ सञ्चार प्रविधिका ससाना सामग्रीसँग सम्बन्धित छ । अर्थात, जीवन र व्यवसायलाई सजिलो पार्न कम्पोनेन्ट, उपकरण, प्रणाली र विद्युतीय उपकरणहरू विकास गर्न यस विषय पढेकाहरुले वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त गर्छन् ।
नयाँ औधोगिक क्रान्तिका लागि प्रविधिको विकास हुनु आवश्यक छ । र, यसका लागि भविष्यमा धेरैभन्दा धेरै इलेक्ट्रोनिक्स, कम्युनिकेसन एण्ड इन्फर्मेसन इन्जिनियरिङ गरेका इन्जिनियरको आवश्यकता पर्न सक्छ । नेपालले पछिल्ला वर्षहरुमा औधौगिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेकाले पनि यसको महत्व अझ बढेको हो ।
यस कार्यक्रममा जटिल इलेक्ट्रोनिक्स, संचार र सूचना प्रणालीहरूको विश्लेषण गर्न र डिजाइन गर्न प्रविधि र सीपहरू सिकाइन्छ । यो विषय पढेका विद्यार्थीले मोबाइल संचार, अडियो, डिजिटल क्यामेरा, मल्टिमिडिया र इन्टरनेटजस्ता क्षेत्रहरूमा काम गर्न सक्छन् । अर्थात, यसमा स्नातक गरेका विद्यार्थीले डाटा कम्युनिकेसन, डिजिटल सेटेलाइट कम्युनिकेसन आदिमा दक्षता हासिल गर्न सक्छन् र आईटी, दूरसञ्चार क्षेत्रमा जागिर खान सक्छन् । यसको क्षेत्र भनेको सरकारी, शैक्षिक वा औधौगिक जहाँ पनि हुन सक्छ ।
विशेष गरी यो विषय सूचनाप्रविधिको मेरुदण्ड हो । यस कार्याक्रममा इलेक्ट्रोनिक प्रणाली र आधुनिक व्यवसायका लागि आवश्यक प्रविधिको डिजाइन र निर्माणका नवीन विचारहरू विकास गर्न सिकाइन्छ । यस विषय पढेका इन्जिनियरले टेलिकम र सफ्टवेयर उद्योगमा आफ्नो राम्रो भविष्य बनाउन सक्छन् । यसबाहेक यसमा माइक्रो वेब, अप्टिकल संचार, सिग्नल प्रशोधन, दूरसंचार, उन्नत संचार, माइक्रो इलेक्ट्रोनिक्सजस्ता क्षेत्रहरू समावेश छन् । यो विषय पढेका इन्जिनियर एउटा कुनै सुक्ष्म क्षेत्र रोजेर काम गर्न, इनोभेसन गर्न वा बृहत क्षेत्र रोजेर जागिर खान सक्षम हुन्छन् ।
यो चार वर्षको ८ समेस्टर भएको कार्यक्रम हो । कलेजअनुसार यस विषय पढ्नका लागि चार वर्षको ८ देखि १२ लाखसम्म शुल्क लाग्छ । यो कोर्ष सैद्दान्तिक ज्ञान, फिल्ड भिजिट र ल्याबहरुमा प्रयोगात्मक शिक्षाद्वारा पुरा हुन्छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुमा यो विषय पढ्न सकिन्छ । तपाईंले यस विषयका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका निजी कलेजहरु काठमाडौं इन्जिनियरिङ कलेज, एड्भान्सड कलेज अफ इन्जिनियरिङ, सगरमाथा इन्जिनियरिङ कलेज, नेशनल कलेज अफ इन्जिनियरिङ, कान्तिपुर इन्जिनियरिङ कलेज र जनकपुर इन्जिनियरिङ कलेज रोज्न सक्नुहुन्छ । आइओईको प्रवेश परीक्षा पास गर्ने विद्यार्थीका लागि हाल यी सबै कलेजमा यस विषयको भर्ना खुलेको छ । ५ हजारभन्दा कम र्याङ्क ल्याएका विद्यार्थीले पनि यो विषयमा सजिलै अवसर पाउँछन् ।
यस विषयको सेलेबस यस्तो छः
Fundamental of Thermodynamics & Heat Transfer
Computer Orginization & Architecture
Communication System I
Propagation & Antenna
Energy Environment & Society
Communication System II
Power Electronics (Elective I)
Radar Technology (Elective I)
Satellite Communication (Elective I)
Biomedical Instrumentation (Elective I)
Aeronautical Telecommunication (Elective I)
Advanced Java Programming (Elective I)
Data Mining (Elective I)
Embeded System Design Using ARM Technology (Elective I)
Image Processing & Pattern Recognition (Elective I)
Web Technology (Elective I)
Operating System (Elective I)
Agile Methodologies (Elective II)
Broadcast Engineering (Elective II)
Optical Fiber Communication (Elective II)
Database Management System (Elective II)
Networking with IPv6 (Elective II)
Big Data Technologies (Elective II)
Remote Sensing (Elective III)
Multimedia System (Elective III)
Enterprise Application Design & Development (Elective III)
XML: Foundation Techniques & Applications (Elective III)
Artificial Intelligence (Elective III)
Geographic Information System (Elective III)
Speech Processing (Elective III)
साओमीले गर्यो ‘रेडमी नोट १०’ सिरिजका ४ स्मार्टफोन सार्वजनिक
इन्जिनियरहरुको निर्वाचन बैशाख २४ मा सर्यो
नयाँ मिटर जडान गर्दा ५ हजार घुस लिने विद्युत प्राधिकरणका यी ४ कर्मचारी !
अतिरिक्त रकमसहित सब–इन्जिनियर अख्तियारको नियन्त्रणमा
चौधरी ग्रुपको मध्यमोदी जलविद्युत आयोजना यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने
शेयर मार्केटमा लगानी गर्दा एक इन्जिनियरले गुमाए २८ लाख
इन्जिनियरिङका विद्यार्थीलाई पश्चिमाञ्चल क्याम्पस प्रमुखको जवाफ, ‘राजनीति गर्न तेरो बाउले सिकायो’
इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ– भविष्यमा काम पनि, दाम पनि
इन्जिनियरिङमा पोखरा विश्वविद्यालयद्वार ३८७ कोटामा छात्रवृत्ति आह्वान (अनलाइन लिंकसहित)
नेपाल बैंकले माग्यो १९२ स्थायी कर्मचारी, इन्जिनियरहरुलाई पनि अवसर
सुपर मादी हाइड्रोपावरमा विभिन्न विद्याका २४ इन्जिनियर आवश्यक (विज्ञापनसहित)
बौद्दिक चोरीको आरोप लागेका इन्जिनियर पाण्डेको बयान– कुरै नबुझी फसाउन खोजियो